Tafiditra ao anatin�ny vaninandro fety isika mianakavy izao.
Na samy variana amin’ny rotorotom-piainana andavanandro aza dia ilaina ny mampitodika ny saina amam-panahy. Izay rehetra anontaniana dia milaza fa mafy noho ny tamin’ny taon-dasa ny miatrika ny fety tamin’ity taona ity. Ny mahagaga anefa dia tsy mifampitsinjo isika mianakavy. Vao tamin’ny herinandro no niely ny fiakaran’ny vidin’ny entana. Toy ny isan-taona dia voalaza fa manararao-pety ny sasany ka mirongatra indray ny fanafenana ireo entana ilaina andavanandro. Mampitandrina ry zareo avy anivon’ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa fa mirongatra ny entana lany daty eny an-tsena amin’izao ankatoky ny fety izao. Ny mpitondra efa manao ny ataony, isika entina koa ity manary ny kolontsaintsika. Hifamono amin’ny endriny an-kolaka toy izany eto foana isan-taona ?